Kolontsaina Bali " Journey-Assist - Fomban-drazana. Filozofia. Religion.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Kolontsaina Bali
Kolontsaina, fomban-drazana, Fivavahana ary filozofia any Bali
7 ny fanehoan-kevitra
Zavakanto toy ny endri-pirenena ho an'ny Balijii
Ny fombafomba sy ny fomba amam-panao Bali
Fety any Bali
Ny kolontsain'i Bali dia mifandray akaiky amin'ny maha-mpivavaka amin'ny mponin'ny nosy. Ny lohahevitra ara-pivavahana dia mahazatra indrindra amin'ny zavakanto hita maso eo an-toerana. Ny sarin'andriamanitra sy zavaboary angano dia malaza be, izay tsy hita any amin'ny tempoly ihany, fa ao koa amin'ny asa-tanana nataon'ireo mpanao asa tanana Bali. Ankoatr'izay, ny lohahevitry ny fiainana dia dia mahazatra - sarin'ny biby sy zavamaniry, indrindra ny voninkazo.
Mahaliana koa ny dihy sinoa. Toy ny zavakanto any an-toerana, ny dihy Bali dia matetika mifototra amin'ny lohahevitra ara-pivavahana. Mino ny olona Bali fa ny Tompon'ny Lanitra - ilay andriamanitra Indra no namorona ny dihy. Ny dihy eto dia mizara ho "laika", izay azo zahan'ny rehetra ary "mikatona". Ny mpizahatany dia afaka mijery ny dihy Barong sy Kechuak. Mba hahita an'i Kechuak, vahiny maro no tonga ao amin'ny tempolin'i Luhur, miorina amin'ny hantsana lehibe iray. Avy amin'izany no ahafahanao mankafy ny manodidina sy ny ranomasina. Quechuak dia tanterahina eto ho an'ny mpizahatany aorian'ny filentehan'ny masoandro.
Fitaovana mozika Bali
Ny mozika Bali dia manana ny mampiavaka azy ihany koa ary manentana ny fahalianana. Izy io dia tantanin'ny gamelan - orkesitra mozika manokana an'ny mponina ao amin'ny nosy, izay misy karazan-java-maneno - metalylôna, tadin-drivotra, rivotra, valiha - karazana amponga, timpani, gong. Ny tena tanjon'ny gamelan dia ny miaraka amin'ireo filaharana. Na izany aza, matetika ny gamelana dia manao ny mozikany indrindra ho an'ireo mpizahatany. Araka ny finoan'ny Bali, ny andriamanitra Batara Guru, izay nantsoina hoe Mpampianatra Faratampony, dia namorona ny mozika.
Ny B Baliese dia tena mandray sy mandray, na izany aza, ny vahiny dia tokony hanaja ny fivavahany sy ny toetrany nasionaly. Ka ny fanondro olona manana rantsantanana na tongotra dia fihetsika manafintohina be. Ny olona eo an-toerana dia mihevitra ny loha ho ny faritra lehibe indrindra sy tsy azo esorina. Noho izany antony izany, tsy afaka mikasika ny lohan'ny olon-kafa ianao, na dia miezaka hampiseho finaritra mihitsy aza.
Mampihatra ny kanto ho toy ny kolontsaina ary mampiavaka ny Bali
Ny vokatra ao amin'ny tompo ao Bali dia manavaka amin'ny hatsarany sy ny hatsarany mahafinaritra. Ireo dia sary sokitra, sokitra, hosodoko, firavaka, akanjo, lamba ary zavatra hafa. Na aiza na aiza eto amin'ny nosy dia misy tranombarotra miavaka manokana amin'ny vokatra amin'ny atrikasa manokana. Ny ankamaroan'ireo fivarotana ireo dia niche, na izany aza, amidy na lovia, na akanjo fotsiny, na firavaka firavaka, sns .. Ny fifantohan'ny fivarotana amin'ity karazana ity dia tena manokana amin'ny Ubud, izay azo antsoina hoe foibem-kolotsaina any Bali. Betsaka ny zotra, misy ny mety hisian'ny fihaonana manokana amin'ireo tompon'ny baiko manokana. Raha jerena akaiky ny fanirian'ny mpanjifa dia afaka manao vokatra fanaka ny mpanao asa tanana, singa haingo, sary sokitra, firavaka, lovia, sy ny maro hafa. et al.
Batik any Bali (sary hosodoko)
Ho fanampin'ny voalaza etsy ambony, nanjary malaza be ny batik balisiana, zavakanto manokana amin'ny fandokoana amin'ny lamba. Ny foiben'ny batik dia ny faritra toa an'i Klungkung, Gianyar ary Singaraja. Mandeha fitsangatsanganana any amin'ny orinasa izy ireo. Ny orinasa any an-toerana dia manana fivarotana mivarotra vokatra izay azo vidiana ho fanomezana lehibe ho an'ny fianakaviana sy ny namana.
Ny sokitra vato any Bali
Ilay vohitra Batubulan, izay any avaratra atsinanan'ny tanànan'i Denpasar, dia nalaza noho ny sary sokitra vato. Betsaka ny fivarotana asa tanana mivarotra sary sokitra misy lava lava na vato matevina, izay mety mavo, mavokely na volo.
Ivon-trano firavaka Bali
Bali Jewelry Center - Cheluk Village (Tanànan'i Celuk), izay fantatra amin'ny anarana hoe "vohitra volafotsy". Ireo mpanao asa tanana eo an-toerana dia hita eo am-piasana, mandehandeha amin'ny arabe rehetra any Cheluk, satria ny atrikasa sy fivarotana mpanao asa tanana dia nalamina tao an-tranony mihitsy.
Afaka manafintohina anao ianao raha mahita ny fomba, tsy misy fitaovana avo lenta, ny olon-tsotra dia mamorona sangan'asa amin'ny zava-kanto firavaka eto. 🙂
Ivontoerana kanto Bali
Ny tanànan'i Sukawati, izay 4 km miala an'i Cheluk, no iray amin'ireo ivon'ny fiantsenana zavakanto ho an'ny mpizahatany. Ny tsenan-kanto eo an-toerana Pasar Seni, izay eo afovoan'i Sukawati, dia manolotra entana maro haingon-trano, sarona, lamba, harona, pendants mozika ary asa-tanana maro hafa tany am-boalohany.
Batuan endrika sary hosodoko. Bali
Saika tsy takatry ny saina intsony, nifarana ny tanànan'i Sukawati ary nanomboka avy hatrany i Batuan. Ao amin'ity tanàna ity dia nipoitra ny fomba fandokoana ary miroborobo izao, izay antsoina hoe batuan. Misy galerie eto izay natao ho an'ny mpizahatany.
Ny sary sokitra ao bali
Ny sokitra hazo. Bali
Mas - tanàna malaza amin'ny sary sokitra hazo... Afaka tonga eto ianao fiantsenana ary ankasitrahana fotsiny ny vokatra nohamasinin'ny tompo. Ny fivarotana fotoana dia manolotra fitaomana haingo vita amin'ny hazo: sarin'ny sarin-tsoratra avy amin'ireo angano ao an-toerana, tarehin'ny olona, ​​biby, sns.
Ireo dia sangan'asa tena mahavita an-tànana nataon'olombelona, ​​mitam-bolo amin'ny antsy ary antsy. (ny mpanoratra manokana dia tsara vintana tamin'ny fanatrehana ny asan'ny sangan'asa manaraka, ary nomena voninahitra aza fa naka ilay fitaovana teo an-tanan'ny tompo ary nanao fitokonana maromaro tamin'ny dragona Komodo hazo ho avy) 🙂
Ny fomba fijerin'ny tontolo sy ny filozofia ny fiainana any Bali dia mifototra amin'ny fivavahana eo an-toerana. Ny Buddhisme sy ny Hinduisme dia niely teto tao anatin'ny vanim-potoana 8 ka hatramin'ny 16. Ny vokatr'izany dia ny fananganana Hinduisme hafahafa teo an-toerana izay manana singa bodista sy animisme.
Ny filozofia hindoa dia tsy nibata tanteraka fombafomba animista maro loko, fa ny fanontaniana lehibe ifantohan'ny Hindus eo an-toerana dia ny hoe "Aiza?" ary aiza? " Avy aiza ny olona, ​​ahoana no hanafaka azy? Rahoviana izy no teraka indray ao amin'ny vatana vaovao? Ahoana no tokony hiainanao mba hanarahana ny firindrana sy hiantohana ny fitohizan'ny fizotran'ny karma?
Resy lahatra ny Bali fa amin'ny asa ratsy dia "mandoto" ny fanahin'ny olona iray, ka izay no antony tsy hahaterahany ho olombelona amin'ny fahatongavany ho nofo taty aoriana. Noho izany antony izany dia miezaka izy ireo ny hanadio ara-panahy.
Ny filozofia Bali dia midika fiderana ny fiainana tsy tapaka, izay heverina ho fanomezana lehibe indrindra an'ireo andriamanitra. Ao amin'ny sela samihafa amin'ny fiarahamonina Bali dia miakatra ity fisaorana tsy misy fitsaharana ity izay manome aingam-panahy ny lafim-piainana rehetra: ny mponina eo an-toerana dia mivavaka amin'ny razana efa nodimandry ao amin'ny fikambanan'izy ireo, misaotra an'ireo andriamanitra noho ny harena ara-nofo ao amin'ny vondrom-piarahamonina matihanina, mivavaka mba hitehirizana ny tranony sy ny faritany any amin'ny fiarahamonina ambanivohitra - banyar.
Ny filozofia momba ny mponin'i Bali dia marika amin'ny fandriampahalemana. Hatramin'ny fahaterahana, ireo fitsipika manaraka momba ny tsy herisetra, nalaina tamim-panajana ny natiora sy ny manodidina. Mino ny balinese fa aorian'ny fahafatesana, ny fanahin'ny maty dia hateraka atsy ho atsy amin'ny fianankaviana iray izay niarahany nandray anjara nandritra ny androm-piainany. Midika izany fa ny olona rehetra ao amin'ny fianakavianao dia tokony ho tiana sy tiana ary hajaina.
Noho ny fahitana izao tontolo izao, ny mponina ao Bali dia manavaka amin'ny fahasoavana sy fahafaham-po. Tena ambany ny heloka bevava amin'ity nosy ity. Na dia eo aza ny ambany ny fidinan'ny maro an'isa ao amin'ny vahoaka dia faly amin'ny fiainany ireo olona ireo. Nanaiky izy ireo ary niresaka tamin'ny mpizahatany lavitra noho ny fahazoana harena. Mazava ho azy, eo amin'ireo mpivarotra mahafinaritra dia misy ihany koa ny manelingelina sy manelingelina, izay miezaka manangona zavatra, nefa tsy maro amin'izy ireo.
Mahavariana fa ny olon'i Bali dia lasa “herin'ny mpiasa” taompolo vitsivitsy lasa izay. Talohan'izay, ny asa lehibe rehetra, anisan'izany ny mavesatra, dia nataon'ny vehivavy.
Ary izao dia mahatsikaiky ny famoahana izany. Ny ankamaroan'ny vehivavy miasa, ny lehilahy kosa aleony miala sasatra amin'ny aloky ny hazo rofia na eo amin'ny fahitalavitra.
Tsy collage ity. Ary ireo no tena biriky.
Any amin'ny nosy aza dia misy tsangambato vehivavy manao asa ara-batana na asa mafy.
Castes any Bali
Ny fiaraha-monina Bali dia miorina amin'ny rafitra caste izay misy castes 4:
sudras (mpanompo na tsy azo alaina)
Amin'ity tranga ity dia ny vitsy voalohany amin'ireto castes ireto dia vitsy kokoa amin'ny sudras. Na izany aza, ny fizarana caste ho any Bali dia tsy dia mafy loatra, ohatra, any India, ka ny solontenan'ireo castes ambany dia tsy iharan'ny fanavakavahana lehibe.
Ny ankamaroan'ny Bali dia monina amin'ny tanàna antsoina hoe desa. Ny mponina ambanivohitra dia miray hina amin'ny vondrom-piarahamonina kely - banyar. Banyar no vondrona sosialy any Bali. Ny lohan'ny fianakaviana amin'ny fivorian'ny Banyarars dia mirotsaka amin'ny famahana olana maika, amin'ny fampiharana ny politikam-panjakana, ny fikarakarana lanonana fety sy fombafomba ara-pivavahana
Inona no dikan'ny fahaterahana amin'ny Bali
Ny fombafomba voalohany amin'ny fiainan'ny mponina rehetra amin'ny nosy dia mifandray amin'ny fahaterahana. Aorian'izany, tanterahana ny fombafomba fandevenana ny placenta ao an-jaza. Any Bali dia omena ireto anarana ireto ny ankizy: ny zaza voalohany ao amin'ny fianakaviana dia Putu na Wayan, ny faharoa dia Kadek, ny fahatelo dia Komeng na Neman, ny faha-1 dia Ketut, ary avy eo ny zaza faha-2 sy ny manaraka dia nomena anarana mitovy amin'ny Boriborintany faha-3. Ny ankamaroan'ny fianakaviana any Bali dia manan-janaka maromaro. Mandritra ny fahazazana dia misy fombafomba manokana mifandraika amin'ny fahazazana sy fahamaotiana.
Fampakaram-bady tao Bali. hadita
Ny fampakaram-bady dia zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny Bali. Matetika izy ireo dia manambady aloha ary miteraka zaza aloha. Ny kasta dia ampitaina amin'ny ray aman-dreny mankany amin'ny zanaka, ary koa amin'ny fanambadiana. Raha misy mariazy eo amin'ny solontenan'ny kasta isan-karazany, ny vady izay ambany ny kasta dia miakatra amin'ny filan'ny vadina hafa. Misy safidy 2 fampakaram-bady nentim-paharazana ao amin'ny nosy - mapadik sy ngorod. Ilay voalohany dia mampatsiahy ny mariazy eropeana mahazatra. Ny faharoa dia ny fakana an-keriny ny ampakarina amin'ny mpanambady, arahin'ny fombafombam-panambadiana, ary avy eo dia natolotra ny zava-misy fotsiny ny ray aman-drenin'ilay zazavavy.
Inona no dikan'ny fahafatesana ho an'ny Bali
Ny fahafatesana any Bali matetika dia misy ny fandevenana olona maty. Mahavariana fa eto io hetsika io dia miaraka amin'ny fihirana sy ny fanasana ny fianakaviana rehetra. Matetika ny maty dia alevina aloha vao maty ao an-tany mba hiomanana amin'ny fombafomba may, ary avy eo dia cremated mifanaraka amin'ny fomba fanao.
Fa ny zava-dehibe dia ny hoe ny fahafatesan'ny Bali dia tombony tsara kokoa.
Ny ankamaroan'ny mponina ao Bali dia tsy mahita ny alina manomboka amin'ny 31 desambra ka hatramin'ny 1 janoary ho fialan-tsasatra. Tena mankalaza ny Taom-baovao Bali any an-toerana tokoa ny mponina eo an-toerana, izay ankalazaina 2 volana aorian'io, ary ny Taom-baovao maneran-tany ho fialantsasatra eto dia karakarain'ny mpizahatany ihany.
Taom-baovao sinoa any Bali
Ny datin'izy ireo isan-taona dia faritanin'ny kalandrie sinoa izay. Ao Bali, ity fialan-tsasatra ity dia antsoina hoe Year Baruimlek. Io dia nankalazaina ao amin'ny nosy amin'ny andro mitovy amin'ny any Sina.
Taom-baovao Bali. Nyepi. Andro fahanginana
Ity dia fialantsasatra tena manan-danja ho an'ny Bali, izay miantso azy hoe Nari Raya Nyepi ary mankalaza ny 17 martsa. Maharitra 3 andro ny fankalazana, ka samy manana fombafomba samihafa.
Ao koa ny vondron'olona kristiana any Bali. Ny 30 martsa dia ankalazaina tsara ny zoma tsara tarehy, izay andro tsy iro.
Andro maneran-tany, antsoina hoe Hari Burukh, andro iray any Bali, toy ny ao amin'ny firenentsika. Nankalazaina io ny 1 may.
Andron'ny fahaleovantenan'i Indonezia
Ity fetim-pirenena ao Bali sy manerana ny firenena ity dia nankalazaina tamin'ny 17 aogositra. Tamin'ity andro 1949 ity, taorian'ny fanjanahana Holandey ela dia neken'ny fitsarana Hague ny fahaleovantenan'i Indonezia.
Galungan fialan-tsasatra any Bali. Fandresen'ny soa amin'ny ratsy
Izany dia fialantsasatra ara-pivavahana iray ilazana ny fandresena ny tsara amin'ny ratsy. Iray amin'ireo fialan-tsasatra lehibe indrindra ao Bali, natokana ho an'ny mpamorona an'izao rehetra izao sy ny fanin'ny razambeny. Nankalazaina ny 19 ka hatramin'ny 29 febroary.
Fivavahana tao Bali
Ny ankamaroan'ny vahoaka Bali (manodidina ny 84 isan-jato) dia milaza ny sampan'ny Hindoisma eo an-toerana, izay antsoina hoe Agama Hindu Dharma. Azo faritana toy ny fifangaroan'ny Hindoisma (Shaivism) sy ny finoana mpanompo sampy sy ny Buddhism. Ny Hindoisma no antony mahatonga ny rafitra caste izay mitranga any Bali, fa ankehitriny dia tsy mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fifandraisana ara-tsosialy ary manan-danja indrindra amin'ny fombafombam-pivavahana - indrindra fa ny brahmana ihany no tokony hitarika ireo fombafomba ireo.
Na dia izany aza, ny fivavahana Bali. Izay olona manaja tena manerana ny nosy dia mitondra fanomezana ho an'ny fanahy. Mino ny balinina fa ny zavaboary rehetra dia monina ao aminy, na izany aza, ny isan'ireo fanahy lehibe indrindra dia miaina any an-tendrombohitra, ary ireo andriamanitra dia mipetraka amin'ny tampony. Ny ampahany lehibe amin'ny fivavahana hindhar Dharma dia ny fiankohofana ny razana efa nandao. Taorian'ny fahatongavan'ny olon-dehibe, ny fomban-drazana Bali rehetra rehetra dia manasa ny hanorina tempoly kely farafaharatsiny eo akaikin'ny tranony. Ny mponina ao Bali dia tsy manomboka miasa raha tsy manontany aloha amin'ny pretra hoe ahoana ny andro mahasoa na andro na ora iray, inona no toerana misy ny hery masina sy ny demony ao anaty kodiarana. Mandritra ny fananganana trano, izy ireo dia mandinika ny lalàna ara-pinoana ho an'ny toerana misy ny tempoly manokana, toeram-ponenana, lakozia ary fidirana.
Fivavahana vitsy an'isa any Bali
Manodidina ny 13 isan-jaton'ny mponina ao Bali no Silamo. Ny ankamaroany dia monina any Sangarazhde sy Denpasar izy ireo. Misy koa ny Kristiana, izay mahatratra 1,5 isan-jato eo ho eo, ary ny Buddhists, izay 0,5 isan-jato monja.
Nitory, teny amoron-dranomasina mainty kely (lavitra ny toerana mpizahatany), fombafomba miaraka amin'ny fanomezana fanomezana ho an'ny ranomasina ...
Tsara tarehy izany .. nahatonga fientanam-po mivantana, nomena ny ranomasina tiako;).
Raha ny fahazoako azy ... ny Balià dia manana fihetsika lehibe manohitra ny Ranomasina .. hatrany an-tendrombohitra (indrindra fa any amin'ny volokano Agung) .. mankany amin'ny natiora, ny biby.
Toa ny (indrindra fa any aoriana any) izy ireo dia manandrana tsy handresy ny natiora, fa miaina miaraka aminny maha-symbiose azy.
Eny, any amin'ny firenena rehetra any Azia atsimo atsinanana, ivelan'ny zotram-pizahantany, dia manandrana miaina mifanaraka amin'ny natiora ny olona. Ary, mahavariana, mahay azy ireo izy ireo!
Fa ahoana kosa, raha ny zavaboary no manome azy ireo sakafo sy fialofana. Ary io toetra io ihany, miaraka amin'ny fanohanan'ny volkano Agung sy ny ranomasina, dia afaka manala izany rehetra izany ao anaty maika.
Raha tsy maniry ianao dia manaja azy ireo izay miankina be dia be.
Raha jerena voalohany, dia toa tsy dia mahay loatra amin'ny fombafomba mamitaka azy ireo ny Bali ... ary tanterahin'izy ireo satria 'ilaina' izany. Rehefa dinihina tokoa, raha manontany an'ity na ity Balisiana ianao hoe maninona no ataon'izy ireo izany fa tsy hafa, dia tsy hahazo valiny takatra ianao.
Saingy .. raha mandinika lohahevitra lalindalina kokoa ianao, ary mametraha fanontaniana amin'ny baleikano mba hanazava izany fa zara raha mahalala sy maniry fanazavana fotsiny ianao dia afaka mahazo valiny feno momba ilay fanontaniana.
... ary miharihary fa izy rehetra dia 'ao anaty lohahevitra' .. tsy mirona hizara amin'ireo izay liana noho ny fahalianana tsy misy dikany fotsiny izy rehetra.
Tiako manokana ny vahoaka Bali amin'ny lafiny kolontsaina sy ny fomban-drazana. Mampalahelo fa tsy voakitika amin'ny fomba tsara indrindra izy ireo satria mifanakaiky amin'ny finoana Silamo Java ary miaraka amin'ny 'fifanoherana' .. ary Bali dia matetika avy amin'ny nosy mpifanila vodirindrina mahantra no miasa, fa tsy ny contingent manambina indrindra ... mirona amin'ireo fomba tsy mahomby hanan-karena ..
Ekeko ny hevitrao Araka ny fandinihany, dia niavaka tamin'io hevitra io ihany izy
Ary iza no maniry hahita ny fanahy (ary ny olana ara-pivavahana dia olana ara-panahy), raha miakatra tsy fahaizana mandala izany izy ireo.
Mpandehandeha tany aloha
Ny sary sokitra hazo dia tsy mampino azy ireo fotsiny. Sarotra ny hino fa izany rehetra izany dia vita amin'ny tanana sy ny karazana mini-chisels sy incisors mahazatra.
Etsy andaniny, amin'ny alàlan'ny filazan'ny tompon'ny Bali azy manokana fa nanao an'ity taranaka ity izy ireo, ka, angamba, niaraka tamin'ny traikefa toy izany, dia mandeha ho azy ny vokatra.
Mitovy ihany, misy sokajy roa ny vokatra vita amin'ny hazo, natao atsipy any amin'ny be sy ny maro .. ambany kalitao, amin'ny antsipiriany ambany, amin'ny tsy fanarahana ny symmetry ... ary misy ireo izay tena vita amin'ny fanahy. Saripika sarotra sy maneho hevitra ary saika ara-panahy.
Reply to Mpandehandeha tany aloha
Misaotra ny hevitra!
Maro amin'ireo asany dia tena talanjona amin'ny antsipiriany ambony indrindra sy ny lanjan'ny zavakanto. Ny 95% amin'ny olona eto amin'izao tontolo izao dia tsy mahasarika ny zavatra azon'ireo Baliianina mitrandraka kitay amin'ny fitaovana iray. (fatiantoka ny tarehimarika)